Dowladda oo sheegtay in xubno Shabaab ah lagu dilay shabeellada hoose | SMC
Home WARARKA MAANTA Dowladda oo sheegtay in xubno Shabaab ah lagu dilay shabeellada hoose
Dowladda oo sheegtay in xubno Shabaab ah lagu dilay shabeellada hoose
Kadib markii shalay ay la wareegeen gacan kuhaynta deegaanka Janaale gobolka shabeelada hoose ciidamadda xoogga dalka ayaa halkaasi waxaa ay ku dileen labo sarkaal iyo afar dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Siciid dheere oo ahaa sarkaal Al_Shabaab u qaabilsanaa degaanka Ceel-saliini ilaa Janaale, halka kan labaadna lagu magacaabi jiray Bukhaare, waxaa uuna Al-Shabaab isna u qaabilsanaa degaanka Janaale.
Taliyaha Guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka ee danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa sheegay dagaalka lagu dilay labo sarkaal iyo afar dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.
Ciidamada Xoogga ayaa saakay waxaa ay howlgal miino baaris ah ay ka wadaan xaafadaha deegaanka Janaale ee gobolka shabeellada hoose.
Previous articleDhageyso:-Wasiir shaaciyey hal Arrin oo ay uga qeyb-galeyn Shirka Garoowe
Next articleSAWIRO:-Ciidanka Dowladda oo howlgal miino-Baaris ah ka wada Shabeellaha Hoose